Wire fanoherana, Wire heating, Wire nikela - TANKII
Herinaratra fanoherana herinaratra Nichrome 70/30 fanafanana ...
0.09mm ho an'ny mpanohitra Wirewound Copper Nickel Cu ...
T Type Thermocouple Constantan Wire miaraka amin'ny TP TN ...
Electronic Component Circuit Board Mitsambikina Wire Mi ...
Shunt Resistor ho an'ny fandrefesana avo lenta ankehitriny, Co ...
Constantan Copper Wire Sampling Plug-in 2W 10m ...
Resident Wire Constantant Resistor 30Ω 5% D = 0,5m ...
TANKII ALLOY (XUZHOU) CO., LTD. dia nirotsaka lalina tamin'ny sehatry ny fitaovana nandritra ny am-polony taona maro, ary nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy be amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena. Ny vokatra dia naondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 50 ary noderain'ny mpanjifa iraisam-pirenena.
Tankii Alloy (Xuzhou) Co., Ltd. no orinasa faharoa ampiasain'ny Shanghai Tankii Alloy Materials Co., Ltd., manokana amin'ny famokarana tariby fanamafisana herinaratra fanoherana avo lenta (tariby nickel-chromium, tariby Kama, vy-chromium -alumine tariby) sy ny marimarina…
Tankii Apm Mivoaka
Vao tsy ela akory izay, ny ekipanay dia nahomby tamin'ny famolavolana TANKII APM. Izy io dia metallurgical mandroso, nanamafisana ny fanaparitahana, firavaka feCrAl ferrite izay ampiasaina amin'ny mari-pana fantsona hatramin'ny 1250 ° C (2280 ° F).
Nikoropaka hamaha ny herinaratra i Shina ...
Ny 27 Novambra 2019, lehilahy iray no nanatona ...
Na eo aza ny ahiahin'i Evergrande, Sika dia st ...
Zurich (Reuters) -Ny Executive Executive Thomas H ...
Open Coil Heater, Nickel Wire, Bayonet Heater, Ireo singa fanafanana, Bayonet Heating Heating, Wire fanoherana,